प्रेरणा तिमल्सिना जेठ ११, २०७६ | शनिबार
काठमाडौं । सबैको जीवनमा कुनै न कुनै टर्निङ प्वाइन्ट आउँछ जसले उसको सोच, उद्देश्य, चाहना सबै कुरा बदलिदिन्छ । जोगीलाई राजा बनाउँछ अनि राजालाई जोगी । स्नेहाको जीवनमा पनि त्यस्तै टर्निङ प्वाइन्ट आयो जसले पार्टी गर्ने, माछामासुविना खानै नबस्ने, जनावरलाई त्यति वास्ता ...
प्रेरणा तिमल्सिना जेठ ८, २०७६ | बुधबार
काठमाडौं । अपराधशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ, बरु सय अपराधी छुटुन् तर एउटा निरपराधीले सजाय भोग्न नपरोस् । नेपालमा पनि प्रायजसो कारागारको अगाडी यस्तो लेखिएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । अपराध नगरी जेल सजाय भोगेका कैयौं व्यक्तिका उदाहरण वग्रेल्ती छन् नेपाली समाजमा ।...
प्रेरणा तिमल्सिना जेठ ५, २०७६ | आइतबार
अहिले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्वीडिस नागरिक योहान कालिन हुन् । उनलाई वि सं २०७५ को माघ अन्तिमतिर २ वर्षका लागि नेपाली फुटबलका मुख्य प्रशिक्षकका रुपमा नियुक्त गरिएको हो । नेपाली फुटबल टोलीलाई प्रशिक्षण दिएको यो उनको पहिलो अनुभव भने होइन यसअघि पनि उनले ...
प्रेरणा तिमल्सिना जेठ ४, २०७६ | शनिबार
युद्धमा दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढाको साहसिक यात्रा काठमाडौं । यदि मसँग गोर्खाली हुँदा हुन् त संसारका कुनै सेनाले मलाई जित्न सक्ने थिएनन् । हिटलरले भनेका यी शब्दले गोर्खालीको इतिहास बोल्छ । त्यही इतिहास जसको आडमा अहिले पनि हामी आफ्नो शिर उचाल्छौं, छाती फूलाउँछौं ...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख ३१, २०७६ | मंगलबार
काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर नारा मात्रै लगाएर भएन अब यहाँका प्रोडक्टलाई नयाँ तरिकाले प्रमोट गर्नुप¥यो, यही सोचेर एक महिनाअघि मात्रै दुई युवाले मिस्टर कर्न शुरु गरे । ‘मिस्टर कर्न’ अर्थात् मकैको मात्र परिकार पाइने ठाउँ । वर्षौदेखि प्राय स...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख २८, २०७६ | शनिबार
नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको छात्रवृत्ति पाएपछि स्नातकोत्तर गर्नलाई सृष्टि नर्वे पुगिन् । नर्वे, हंगेरी, फ्रान्स, बेलायत चार देशमा चार सेमेस्टर पढ्न पाइने कुराले नै सृष्टिलाई यस डिग्रीतर्फ आकर्षित गरेको थियो । घुमन्ते सृष्टिको ट्राभल डायरीमा चार नयाँ कथा थ...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख २५, २०७६ | बुधबार
काठमाडौं । दुई वर्षअघि ४ जना युवाहरुको एक समूहले आफ्नै देशमा उद्यम गर्ने योजना बुन्यो । तर ‘गर्ने के ?’ यस प्रश्नको उत्तर केलाउँदै जाँदा कैयौं ‘आइडिया’ उनीहरुको मस्तिष्कमा ठोक्किए । उनीहरुलाई केही नयाँ गर्नु थियो जो अहिलेसम्म नेपालमा कसैले नग...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख २१, २०७६ | शनिबार
काठमाडौं । लक्ष्मी भुसाल अर्थात् रेडियोकी ‘बुढी आमा’ । विगत ५३ वर्षदेखि ‘बुढी आमा’ को भूमिकामा रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रम चलाउँदै आएकी लक्ष्मीलाई ‘हरि शरणम् बुढी’ भनेर पनि चिन्ने गर्छन् स्रोताहरुले । रेडियोका पारखीका लागि उनको ...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख १८, २०७६ | बुधबार
काठमाडौं । कृशप त्वानाबासु र जुनु चक्रधर एक अर्काका लाइफ पार्टनर मात्र नभएर बिज्नेस पार्टनर पनि हुन् । यस पार्टनरसिपले जन्माएको साम्राज्य हो जुम ब्युटी एकाडेमी विथ मेकअप स्टुडियो । नेपालमा सौन्दर्य क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसरह सम्मानित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ त्वानाबा...
काठमाडौं । सोनिस अवाललाई वि सं २०७२ सालको महाभूकम्पमा २२ घण्टापछि सकुशल उद्धार गरिएको थियो । ४ महिनाको बालक २२ घण्टासम्म भग्नावशेषमा पुरिदा पनि जीवित हुनुलाई धेरैले चमत्कार भनेका थिए । कतिले उक्त घटनालाई भगवानको लिला पनि भने । भूकम्पले भक्तपुरस्थित कमलवि...
काठमाडौंका ‘स्मार्ट धोबी’ : लुगा धोएरै लाखौं कमाउँदै(भिडियो सहित)
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख ११, २०७६ | बुधबार
काठमाडौं । मार्केटिङ गरेर जेनतेन राम्रै पैसा कमाइरहेका वेला एकाएक सुजनले सोचे ‘कमाएर मात्रै भएन अब पैसा जमाउनु पनि पर्छ’ । आफ्नै उमेरका युवाहरुको लहडबाट अछुतो रहन सकेनन् सुजन । उनलाई पनि विदेशको डलरले तान्यो । बाहिर जाने चाँजोपाँजो मिलाउन उनी दिल्ल...
खुल्लामञ्चमा सेटिङमा ठडिए सटर, टावर बनाउनुपर्ने ठेकेदार नै सटरवाला !
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख ७, २०७६ | शनिबार
‘आफ्नै देशमा इलम गरौं’ भन्ने सन्देशका साथ चलचित्र गोपी बनाइयो । विदेशको सट्टा आफ्नै देशमा गाई पालेर बस्छु भन्ने एक स्वाभिमानी र परिश्रमी युवाको कथा उठान गरेको उक्त चलचित्रले चौतर्फी चर्चा कमायो । चलचित्रमा विपिन कार्कीले गाई पाल्ने ‘गोपी’को भूमि...
प्रेरणा तिमल्सिना बैशाख ६, २०७६ | शुक्रबार
काठमाडौं । करिब ५ दशक अघि बागलुङमा जन्मिएको केटोलाई खेलभन्दा प्यारो केही थिएन । बुबा भन्थे ‘पढ्’, ती फुच्चे भलिबल खेल्थे । आमा भैंसी चराउन जा भन्थिन्, उनी फेरि भलिबलै खेल्थे । भलिबल उनलाई खाना भन्दा प्यारो थियो । खेलेरै अघाउँथे । खेलेरै गल्थे फेरि आराम ...
काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो जब टिभीमा यो हेर्छु, त्यो हेर्छु भन्नलाई कुनै विकल्प थिएन । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने समाचार र केही सन्देशमूलक टेलिचलचित्र नै थिए बसिबियाँलोका माध्यम । बच्चादेखि तन्नेरी युवा, वृद्धवृद्धा सबैका लागि । बाध्यताले भएपनि त्यसवेला थ...
काठमाडौं । राजधानीको अस्तव्यस्त ठाउँमध्ये एक हो न्यूरोड । व्यापार व्यवसायदेखि विभिन्न कार्यालय संघसंस्थाको साझा ‘हब’ भएकाले पनि दिनैभरि यहाँ मान्छेहरुको आवतजावत भइरहन्छ । एक किसिमले न्यूरोड राजधानीकै सबैभन्दा भीड हुने बजार हो । त्यसैले राजधानीको सबैभन्द...
१० रुपैयाँमा सपिङ ! सुखावती स्टोरको प्रशंसनीय प्रयोग
प्रेरणा तिमल्सिना चैत २७, २०७५ | बुधबार
काठमाडौं । करिब ७ वर्षीय जतिकी देखिने प्रतीक्षा आफ्ना आमाबाबासँग कपडा किन्न सुखावती स्टोर आइन् । आमाबाबा कपडा छान्नतिर लागे । उनका आँखा भने एक जोर चप्पलमा टक्क अडिए । चप्पल उनको आवश्यकता होइन रहर थियो । रहर पूरा भयो । रमाउँदै उनले चप्पल लगाइन् । चप्पलको मुल्य १० रुपैय...
प्रेरणा तिमल्सिना चैत २३, २०७५ | शनिबार
काठमाडौं । रेखाले सानोमा भाँडाकुटी खेलिनन् फुटबल खेलिन् । आफ्ना उमेरका साथीहरुले गुडियाको जामा फेरिदिरहँदा उनले आफ्नो नाम अङकित जर्सी पहिरिन् । आमाको आँचल पक्डिदै उनी बजार बजार दौडिनन्, प्रतिस्पर्धीसँग भिड्दै मैदानमा दौडिइन् । त्यसैले जबजब रेखा आफ्नो बाल्यकाललाई फर्...
काठमाडौं । कुनै समय यस्तो थियो जब नेपाली समाजमा घाँसदाउरा बोक्ने, दुधे बच्चालाई ढाडमा बोकेर एक कोश टाढा भएको पँधेरामा पानी लिन पुग्ने, मुरी मुरी अन्नलाई भकारीबाट ढिकी र ढिकीबाट फेरि भकारी हुँदै चुलोसम्म पु-याउने जस्ता क्रियाकलाप महिलाका जिम्मेवारी हुन् भन्ने बुझा...
प्रेरणा तिमल्सिना चैत २०, २०७५ | बुधबार
काठमाडौं । जसले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबललाई बुझेको छ निसन्देह उसले सावित्रालाई चिनेको छ । सावित्रा भण्डारी उर्फ साम्बा, राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर । ‘यो हो नि त खेल’, ‘बल्ल केटीको गेम हेर्न मज्जा लाग्न थाल्यो’, ‘हैट खत्रा...